I-Absolute Beach Front ❤️ I-Toolakea Beach Retreat - I-Airbnb
I-Absolute Beach Front ❤️ I-Toolakea Beach Retreat
Toolakea, Queensland, i-Australia
I-ikhaya ephelele ibungazwe ngu-Laine
Ufuna ukuphumula okuthulile okusogwini lolwandle nokuphumula emabhishi asenyakatho ye-Townsville? I-Toolakea Beach Retreat iwukubaleka kwakho okuphelele! Ikhaya lethu lamaholide elipholile nelishaya kamnandi lisogwini lolwandle, ukuhlobisa kuyamangalisa futhi ikhaya lihle. Siyaziqhenya ngesilinganiso sethu se-Super Host sezinkanyezi ezingu-5 ezivakashini zethu eziningi, sicela ufunde ukubuyekezwa, leli iholide lakho elihle noma indawo yakho yokuphumula ngempelasonto!
Ikhaya lethu lamaholide elihle elingasogwini lolwandle liyatholakala njengendawo yakho yomuntu siqu yokubalekela ebhishi! Vuka ngokukhanya kwasekuseni ukuze ubone nomsindo wamagagasi futhi ube umuntu wokuqala ukushiya onyawo lwakho esihlabathini :)
Ikhaya lakhiwe ngendlela yokubamba umoya ohelezayo wasolwandle elinezicabha ezinkulu zengilazi ezishelelayo namafasitela e-louvre nabalandeli kulo lonke. Indlu yonke kuhlanganisa negumbi lokuphumula kanye nawo wonke amagumbi okulala ane-air conditioner ngezikhathi ezingavamile ongase uyidinge. I-Toolakea Beach Retreat iyikhaya elivuselelwe ngokuphelele, lesimanjemanje, lesitayela futhi linethezekile. Sinamagumbi okulala angu-3 (imibhede eyi-Queen engu-2 kanye nombhede wenkosi ongu-1 x - leli gumbi lokulala lingenziwa libe ngama-Singles amabili ngesicelo sangaphambili), igumbi lokugezela elilodwa (elinokugeza okunethezeka okujulile kanye neshawa yemvula), ipulani elivulekile. indawo yokuphumula, yokudlela kanye nekhishi elinekhishi nendawo yokuwasha ehlome ngokuphelele. Kukhona uvulandi omkhulu ongaphambili wolwandle onezinketho zokuhlala eziningi ezihlanganisa umbhede wosuku owubukhazikhazi kanye nombhoshongo omuhle wokubuka ophakeme, olungele iziphuzo zantambama ukubuka ukushona kwelanga!
Indawo yokuhlala inetafula lokudlela lezihlalo ezi-4, indawo yokuphumula yesikhumba (ene-chaise), isitulo esingalo esintofontofo kanye namakhushini aphansi ezingane (nabadala) abangahlala kuwo. Kukhona umabona kude ne-DVD endlini yokuphumula kanye nokukhethwa kwama-DVD ongawathokozela kanye nomabonakude owengeziwe ozosetshenziswa iDVD ekamelweni lesibili. Ikhaya lifakwe amathayela kulo lonke ngakho-ke lipholile futhi kulula ukuligcina lihlanzekile. Kuhlinzekwa ukugeza kwelineni yombhede kanye namathawula olwandle.
Le ndlu enhle yase-Beach izokubuyisela ebuntwaneni bakho futhi kumnandi, amaholide omndeni! Sitholakala ngasogwini lolwandle e-Toolakea Beach, igugu elicashile ogwini olusenyakatho yeQueensland. Hamba endleleni enesihlabathi eya ogwini futhi ujabulele amahora okukama ogwini, ukubuka izinyoni noma ukudoba. Le ndawo iyindawo ethokozisayo yomthwebuli wezithombe enamathuba amaningi ezithombe - izindawo ezinhle ezinesihlabathi, izintuba zomhlume kanye nokuphuma kwelanga/ukushona kwelanga okumangalisayo. Ukudoba kuningi ngakho letha induku yakho!
Uyimizuzu engu-20-30 nje ukuya ezikhungweni zezitolo ezinkulu kanye nedolobha. I-Toolakea iyindawo enhle, ephephile futhi enokuthula.
Isikhathi sethu esijwayelekile sokungena ngu-2pm futhi ukuphuma ngo-10am. Sijabule kakhulu ukuba nezimo ezivumelana nezimo sincike ekufikeni kwakho ngakunye nezikhathi zokuhamba nokunye ukubhuka kwezihambeli - sicela ubuze!
UMLANDO WAKHO: Sikhetha ukwamukela izivakashi ngesithombe sephrofayela, inombolo yocingo eqinisekisiwe kanye nekheli le-imeyili nge-Airbnb.
Ngicela ukhululeke ukungithumelela umlayezo nganoma imiphi imibuzo onayo mayelana ne-Toolakea Beach Retreat noma indawo, sibheke ngabomvu ukukusingatha!
4.86 · 91 okushiwo abanye
Siyalithanda i-Toolakea Beach - indawo ethule ezwakala sengathi usesiqhingini sakho esishisayo kodwa imizuzu engama-30 nje ungene enkabeni yedolobha! Qiniseka ukuthi uletha ibhakede kanye nefosholo lezingane, ikhamera ukuze ubambe indawo emangalisa kanye nenduku yakho yokudoba!
Izivakashi ziyisebenzisa ngokugcwele iholide lethu le-Beach House ngaphandle kokuxhumana nabanikazi. Sivele sikushayele ucingo uma unemibuzo.
Idiphozithi Yesibambiso - uma ulimaza ikhaya, kungenzeka ukhokhiswe imali efikela ku-$277.
Hlola ezinye izinketho ezise- Toolakea namaphethelo